Maalgelinta Qalabka - Milyan sameeyayaasha
Maalgelinta qalabkaagu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad keydiso lacagtaada baahiyaha ganacsi ee kaladuwan. Waxaannu leennahay shabakad adag oo xiriir la leh hay'adaha maaliyadeed baahiyaha maaliyadeed ee qalabkaaga! Si ka duwan shirkad maalgalin qalab caadi ah, shuraakadayada ganacsi waxay leeyihiin barnaamijyo bilow iyo ganacsiyo aasaasay oo leh amaah fiican. Badanaa, shirkadaha maalgeliya qalabka waxay u baahan yihiin ugu yaraan lix bilood oo ganacsi si ay ugu tixgeliyaan musharraxiinta ku habboon dalbashada maalgelinta si kastaba ha ahaatee iyada oo loo sii marayo heshiisyadayada tan ayaa laga wada hadli karaa. Shirkadda ugu fiican ee maalgelinta ku siinaysa ku sugi mayso inaad sugto, waxay heli doonaan meel fog oo ay ku caawiyaan baahiyahaaga dhaqaale sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah!
Qalabka maalgelinta Qalabka:
Kiro ama Iibsasho
Cusub ama La Leh
Iibi - Dib u Ijaar
Kharashyada jilicsan ee Maaliyadeed
Caymis ayaa jira
Waxaan sidoo kale la shaqeeynaa Bixiyahaaga sidoo kale
Sicirro Hoose oo Isbeddelanaya Isbeddel Laydh ah Ma Jiro Lacag Bixin
Waxaan u habaynaynaa maaliyad qalab qaabka inaad sifiican ugu haboonaato miisaaniyadaada iyo baahiyaha socodka lacagta iyo shuruudaha, adoo adeegsanaya ikhtiyaarro badan oo maalgelin iyo kirayn isugu jira. Maalgelinta sida ugu dhakhsaha badan afartan siddeed saacadood.
Maalgelin ayaa lagu heli karaa qalabka hoos ku xusan
Gawaarida Qashinka & Dib u Isticmaalka
Qalabka Pumper / Vacuum
Meelaha Qashinka & Wiishka
Gawaarida Xamuulka qaada ee fudud, Dhexdhexaad, &
Qalabka Dhismaha / Cawska / Turf
Dukaanada / RMU's
Dukaammada tafaariiqda ah / Dukaamada / RMU`s / Bandhigyada Fasaxa
Tababaraha Gawaarida / Baska Mini / Baska Dugsiga
Qalabka xafiiska iyo alaabada
IT iyo Qalabka Telefoonka
Diyaaradaha, Tareennada iyo Doomaha